Sawirka maanta ” Mucaaradka Puntland iyo Amin caamir | allsanaag
Sawirka maanta ” Mucaaradka Puntland iyo Amin caamir
Sawirka maanta, Mucaaradka Puntland gaar ahaan kuwooda aaminsan in Beel ahaan ay tahay xilligii ay qaban lahaayeen hogaanka Puntland, ayaa haba yaraatee wax fursad ah iska lumin sidii ay u siyaasadayn lahaayeen Doonta reer Puntland u wada raran ee soo caariday , Reer Puntland oo dhamina dal iyo dibadba ay diyaar u yihiin in xoolaha doontaa saaran la badbaadiyo.
Siyaasiyiintii reer Puntlad ah oo qaarkood xilal ka soo qabteen dawladda Puntland, sida dawladaha hoose iyo maaliyadda ayaa iyaga oo siyaasadaynaya Doonta soo caariday la xiriiray Amin Caamir si ay bulshada reer Puntland u marin habaabiyaan.
Xaqiiqda dhabta ah ee ka jirta Boosaaso ayaa waxay tahay in Iska rogooyinkii, Cagf cagafyadii iyo Baldoosyadii uu madaxweyne Cabdiweli Gaas uu u soo gaday jidka Ceel daahir ayaa qayb libaax ka qaadanayaan Badbadada Doonta Reer Puntland u raran.
Siyasiyiinta Mucaaradka Puntalnd ee Amin caamir la xiriiray ayaa u badan kuwo ka soo jeeda degmada Qardho oo wata Xulufo la yiraahdo reer Bari oo ay ku Awr kacsanayaan, ahna kuwa ugu qaylada badan hase ahaatee aan aaminsanayn inay Puntland hogaamin karaan.
← La dagaalanka Faqashta diyaar ayaanu u nahay Siciid Qorsheel ” Waa Mid Taariikhi ah safarkii Madaxwe Farmaajo →